British Council Customer Service's Likes - Myanmar Network
Back to British Council Customer Service's Page
ACCA Exam feed and registration fee May i know about ACCA part 1 exam fees and registration fees. Can I apply at BC and also may i know total cost. Discussion ACCA Exam feed and registration fee 1 Like
ယူကေတွင်ပညာသင်ယူမည့်သူများအတွက် သိမှတ်စရာသုတ… ပိတ်ရက်ရောက်တော့မယ်။ စာအုပ်တွေဘေးဖယ်ပြီး ထွက်လည်ဖို့ မိတ်ဖွဲ့ဖို့ လုပ်ရအောင်။ အဲ့ဒါက ပါတီလား၊ ဘီယာဆိုင်လား၊ တေးဂီတပွဲလား၊ ပြဇာတ်လား၊ စားသောက်ဆိုင်လား၊ ဘိုးလင်းကစားပွဲလား၊ ရုပ်ရှင်လား…. လုပ်စရာတွေ အမျ… Discussion ယူကေတွင်ပညာသင်ယူမည့်သူများအတွက် သိမှတ်စရာသုတ… 15 Likes
အနာဂတ် ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာတော့… ~~ မေမြို့ သို့မဟုတ် ပြင်ဦးလွင် ~~ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ လှပတဲ့ ရှုခင်း သမမျှတသော ရာသီဥတုကြောင့် ကျော်ကြားတဲ့ နေရာ…… လတ်ဆတ်သောလေ စိမ်းစိုသော view points ကြောင့် အနာဂတ် မြေယာ အချက်အချာ အိုးအိမ် စီမံကိန်း… Discussion အနာဂတ် ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာတော့… 1 Like
ခြောက်ခြားဖွယ်ည (ဘာသာပြန်ဝတ္တုတို) အီဗန်၏မျက်နှာသည် ဖြူစုပ်စုပ်ဖြစ်နေသည်။ မီးရောင်ကိုမှိန်လိုက်ချိန်တွင်သူ၏အသံသည် တုန်ရင်ရင်နှင့်သူ့၏ ဇာတ်လမ်း ကို ပြောပြလေသည်။ - “အဲဒီတုန်းက ခရစ်စမတ်အချိန်ဗျ။ ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကို အမှောင်ထုဖုံးလွ… Discussion ခြောက်ခြားဖွယ်ည (ဘာသာပြန်ဝတ္တုတို)5Likes
IELTS FREE SEMINAR at BRITISH COUNCIL Speaker : Daw Haymar Maung [ M.A (English), CELTA/RSA and CEELT II ] Date : Wednesday 11 December 2013 Time : 5:00 to 6:00 p.m. Venue : British Council Library and Information Centre, 78 Kanna Rd, Ya… Discussion IELTS FREE SEMINAR at BRITISH COUNCIL 16 Likes Universal Children’s Day အထိမ်းအမှတ် ရံပုံငေ… Universal Children’s Day အထိမ်းအမှတ် ရံပုံငွေပွဲ အတူတူပျော်ရအောင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် Changing Future of Children (C.F.C) မှ ဦးစီး၍ ကလေးများ၏ ပညာရေးတွင် ပံ့ပိုးကူညီနေသော က… Discussion Universal Children’s Day အထိမ်းအမှတ် ရံပုံငေ…4Likes Joke for all :PP One Chinese person walks intoabar in America Late one night and he saw Steven Spielberg. As he wasagreat fan of his movies, he rushes over to him, and asks for his autograph. Instead, Spielberg g… Discussion Joke for all :PP 24 Likes ငါတို့တွေအသက်တွေကြီးလာကြတယ် ငယ်ငယ်တုန်းက ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ခဲ့တဲ့ မိန်းမကိုင်အိတ်တွေ ခုချိန်မှာ ရွေးဝယ်လာကြရတဲ့အခါ ငါတို့တွေအသက်တွေကြီးလာကြတယ်။ ငယ်ငယ်က ကိုယ်သိဖို့မလိုခဲ့တဲ့ အိမ်တွင်းရေးတွေကို ကိုယ်တိုင် ၀င်စဉ်းစားလာရတဲ့အခါ ငါတို… Discussion ငါတို့တွေအသက်တွေကြီးလာကြတယ်9Likes